थाहा छ ? फिटकिरीले रातारात बदलिदिन्छ तपाईको भाग्य – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/थाहा छ ? फिटकिरीले रातारात बदलिदिन्छ तपाईको भाग्य
घरमा नकारात्मक उर्जा हटाउनका लागि बाथरुममा एक कचौरा नुन वा फिटकिरी भरेर राख्नुहोस्। यसो गर्दा घरमा नकारात्मक उर्जा प्रवेश गर्न पाउँदैन्। स्नान गर्नुअघि पानीमा फिटकिरी राखेर स्नान गर्दा पनि कयौँ लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ।